LibreOffice vs. OpenOffice: ndiani achakunda mutambo pakati peaya masutu? | Linux Vakapindwa muropa
Kana zvasvika kumahofisi emahofisi, tinofanirwa kuzvipira kuuchapupu, nepakati, uye kubvuma kuti Microsoft Office ndiyo yakanakisa. Imhaka yekuti yave iripo kwemakore mazhinji, izvo zvakakonzera kuti ishandiswe nemunhu wese uye, kana tichida kuona kuti hapana matambudziko ekuenderana kana tichigovana, tinofanirwa kushandisa suite yekambani inomhanya Satya Nadella . Tinogona kushandisa Hofisi paLinux, uko sarudzo yakanakisa ndeye kushandisa yavo webhu saiti office.com, asi isu tinogona zvakare kushandisa LibreOffice kana OpenOffice. Dambudziko nderekuti: ndinosarudza ipi uye nei?
Uyu mubvunzo une vazhinji venyu uye mune ino chinyorwa tichaedza kuvabvisa vese. Tichifunga nezve chikamu kana zvese zvandichatsanangura pazasi, ndinoona akajeka anokunda, zvirinani paLinux anoshanda masystem zvinova ndizvo zvinoreva iyi blog. Kana iwe uri vashandisi veWindows kana macOS, ini ndingati hazviite kwauri, kunyangwe painewo zvikonzero zvekusarudza imwe yesarudzo pamusoro peimwe. Tichatanga kutsanangura kuti nei paine sarudzo mbiri dzezvinoratidzika kunge zvakafanana software.
1 LibreOffice uye OpenOffice kodhi yekugovana, yakavhurika mune ese maviri kesi
2 Zvakanaka: uye sei LibreOffice uye OpenOffice zvakasiyana?
3 Kodhi imwe chete, marezinesi akasiyana
4 Ndiani anokunda mutambo?
LibreOffice uye OpenOffice kodhi yekugovana, yakavhurika mune ese maviri kesi
Iwe unogona kutaura kuti iyo yekutanga vhezheni ndeyeOpenOffice, asi isu tinenge tichive tisinganyatso kujeka Iyo yekutanga software yaidaidzwa Star Office, iyo yakawanikwa neSun Microsystems pakupera kwezana ramakore rapfuura, muna 1999. Nguva pfupi yapfuura, kambani yakashandura kodhi yesoftware kuti ivhure uye, gare gare, yakashandura zita rikave OpenOffice yatinoziva tese. OpenOffice yakaenderera mberi mumaoko evashoma veSun Microsystems vashandi uye vanozvipira.
Kudzoka muna 2011, Oracle akatenga Sun Microsystems zvakanyanya kuputsa chirongwa ichi, kana zvakadaro zvinonzwika kana iwe uchifunga kuti yakachinja zita rikava Oracle OpenOffice kugadzira nyonganiso pakati pevashandisi. Senge izvo zvaive zvisina kukwana, akazorega chirongwa ichi. Nhau dzakanaka ndedzekuti vanhu vanga vachishanda paOpenOffice vakagadzira LibreOffice, hofisi suite inoenderana ne Code OpenOffice.org.
Kupera kwenyaya iyi kunonyatso kuzivikanwa: mazhinji ekuparadzira kweLinux akachinjirwa kuLibreOffice. Pazvakaita sekunge OpenOffice yaive rufu rwakafanotaurwa, Oracle akapa chiratidzo chayo kuna Apache, uyo akaramba achichengeta OpenOffice kusvika nhasi uye izvo zvatinoziva nhasi ndizvo chaizvo zvinodaidzwa Apache OpenOffice.
Zvakanaka: uye sei LibreOffice uye OpenOffice zvakasiyana?
Misiyano yacho ishoma. Sezvatove tatsanangura, ese ari maviri akavakirwa paOverOffice.org kodhi, saka shanduko dzinofananidzwa neidzo dziri pakati peChromium neChrome: shanduko diki, nyaya dzerezinesi, kumisikidza, nezvimwe
Hongu pane zvimwe zvinhu zvakajeka: zvinorema zvinochengeta OpenOffice zvakaenda kuLibreOffice, izvo zvakakonzera yechipiri inokura nekukurumidza kupfuura yekutanga, zvakare kuvhura nhamba yakakura uye kazhinji kugadzirisa.
Munyori muLibreOffice (yakasviba modhi)
Mifananidzo yapfuura muenzaniso wekusiyana kwatinowana patinoshandisa sarudzo mbiri. Iyo Munyori, iyo yemavara edhita yakaenzana neIzwi raMicrosoft, kana yakavhurwa nekutadza. FreeOffice sampuro yakachena yakanyanya interface kupfuura OpenOffice, kunyangwe sarudzo kana maturusi achigona kuvhurwa uye angave akafanana.
LibreOffice ichaverenga mazwi munguva chaiyo pasina kuita chero chinhu, nepo OpenOffice ichizozviita kana tikachera zvishoma nesarudzo dzayo. Chaizvoizvo, zvese zviri muWhitter uye mune mamwe mapurogiramu eseite misiyano ndeyekuti ivo vakasarudza kuratidza sei ruzivo Kubva pakutanga
Izvo zvinogona kuitwa muLibreOffice izvo zvisingakwanise kuitwa muOpenOffice ndeyekubatanidza kana kupinza magwaro, izvo zvinoita kuti gwaro riite zvakafanana pane chero hurongwa hwekushandisa. Uye ndizvozvo LibreOffice inogona kuita shanduko nekukurumidza pane OpenOffice yenyaya yekupa marezinesi yatinotsanangudza pazasi.
Kodhi imwe chete, marezinesi akasiyana
Apache OpenOffice inoshandisa rako rekambani rezinesi (Apache), nepo LibreOffice ichishandisa rezinesi mbiri LGPLv3 uye MPL. Pasina kuenda mune zvakadzama, izvi zvinoshandura ku LibreOffice inogona kutora kodhi kubva kuOpenOffice uye kuisimbisa mune yako software, asi Apache haigone kuita zvakafanana kuiwedzera kuhofisi yako suite. LibreOffice inogadzirwa uye inotsigirwa nenharaunda yakakura kupfuura OpenOffice, saka zvese zvitsva zvinosvika pane "Mahara" sarudzo pamberi pe "Vhura" sarudzo. Uye kana OpenOffice iine zano rakanaka uye richiiisa musoftware, iyi theme yekupa mvumo inobvumidza "Libre" kuti ikope nekukasira uye iwedzere kune yayo, vachishandisa kodhi imwe chete pasina nyaya dzekopimendi.
Ndiani anokunda mutambo?
Semushandisi weLinux, ndinazvo zvakajeka: LibreOffice inokunda neKO. Yayo hombe nharaunda yevagadziri inokutendera iwe kuti uwedzere maficha nekukurumidza uye unakirwe nerutsigiro rwakawanda uye kugadzirisa Zvakare, zvese zvitsva zvinounzwa neOpenOffice zvichave IZVOZVO muLibreOffice munguva pfupi kwete.
Chimwe chinhu chakakoshawo kucherechedza mashandisiro anoita software: en mazhinji maLinux anoshanda masisitimu, "Mahara" akaisirwa default, saka hatitombo fanirwa kuzviisa isu pachedu. Kune rimwe divi, kuisa OpenOffice pane anoshanda masisitimu seUbuntu, semuenzaniso, isu tinofanirwa kuenda kune yako kurodha pasi peji rewebhu, dhawunirodha faira riine boka remapakeji eDEB, isa rairo yekumisikidza software, pinda mumwe rairo yekumisikidza kusangana uye dzimwe nguva haina kana kutomboonekwa sekuiswa mune yekushandisa menyu (zvakaitika kwandiri munguva pfupi yapfuura ndichiita bvunzo) .
LibreOffice iri mune zvisirizvo zvekuchengetedza zvakawanda zveLinux masisitimu anoshanda, saka tinogona kuiisa kubva kune akasiyana software nzvimbo nekugadzira akati wandei kudzvanya. Ehezve, kana isu tichida kuisa yazvino vhezheni panguva yekuvhurwa kwayo, iyo yekumisikidza system ichave yakafanana neOpenOffice. Zvinhu zvinochinja zvishoma kana tiri Windows kana vashandisi veMacOS, kunyanya nekuti masutu ese ari maviri akaiswa zvakafanana. Izvo hazvichinje ndezvekuti yega yega painovandudzwa uye mabasa matsva akawedzerwa, pamwe nerutsigiro rwunogamuchirwa.
Chimwe chinhu chekuchengetedza mupfungwa ndechekuti kuva nekambani hombe kumashure kwako kunogona kududzira mune zvekutsigira, izvo Zvinogona kureva kuti software inoda OpenOffice kuti ishande (semuenzaniso: Muturikiri wemunyu). Zvine musoro, kana isu tikawana chimwe chinhu chinofanirwa kuve neOpenOffice yakaiswa, ichi chichava chedu chete sarudzo.
Ndeipi yaunoda? LibreOffice kana OpenOffice?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » LibreOffice vs. OpenOffice: ndiani achakunda iyo hondo pakati peaya mahofisi suites paLinux?
Ini ndinogara neSoftMaker Office.
Kune yangu kuravira kuri nani kwazvo kupfuura izvo zviviri zvataurwa. Inobhadharwa, asi yakachipa kwazvo.
Ini ndinobvumirana naSoftmaker, ine zvakare ine yakazara bhuku remanyorero uye nhare. Ndiko kukanganisa kukuru kweLibreOffice. Kunyangwe iine bhuku rekushandisa, harina kuvandudzwa kana kupedziswa
Zvinotaridza kwandiri kuti munyori wenyaya haana zano rakakura.Openoffice haisisina kuenderera kwenguva yakareba.Uye iko, Ministry of Justice haichashandisi openoffice uye yaisa libreoffice pachinzvimbo. Openoffice yamiswa. Ndokumbirawo uzvizivise zviri nani usati wanyora
Yakagadziridzwa mwedzi 6 yapfuura (APACHE OpenOffice).
AndrOpen Hofisi pane Android iripo uye inouya inobatsira kuti iiswe uye zvinosuruvarisa kuti Libre Hofisi haina kugadzira vhezheni yayo.
Kune vamwe vese ini handizive chero munhu anoshandisa Apache Open Office uye kwete Libre Office nhasi.
Martin D. akadaro
Ini ndinoshandisa OpenOffice pabasa rangu asi iri shoma zvakanyanya kana ichienzaniswa nemamwe masuti pamusika. Kune matambudziko nemamwe mabasa aripo kubva kwekutanga vhezheni ayo asina kugadziriswa izvozvi. Asi, maererano nekudzikama uye nekumhanya kwakanyanya.
Muhupenyu hwangu hwezuva nezuva ini ndinoshandisa LibreOffice iyo inowirirana zvizere nemafaira eExcel uye ine akawanda mabasa akakosha anoita kuti hupenyu hwangu huve nyore. Asi inononoka, dzimwe nguva haina kugadzikana uye ivo vanovhura vhezheni dzakawanda mumutsara zvekuti vanokanganwa kugadzikana kana kuti zvese zvinoshanda kusangana nemisi yakatarwa. Kusvika padanho zvinoita sekunge haina kumbogadzirira.
Zvisinei, ndinonamatira neLibreOffice ndisingazeze.
Pindura Martin D
Mhoroi, Martín D. Chinhu pamusoro pemabhuru chinhu chavanotaura ivo pachavo. Semuenzaniso, ivo vava pa6.2.4 asi vanokurudzira 6.1.6 kana iwe ukavimba nesoftware uye yakachengeteka software. Kana voburitsa zvishanu kana nhanhatu shanduro dzekuchengetedza (dzinoenderana ne v5) ivo vanotozvikurudzira. Izvo iwe zvaunogona kuita kushandisa iyo yakakurudzirwa vhezheni.
Ndakarega kushandisa Openoffice makore mazhinji apfuura. Nhasi ndinoshandisa Libreoffice inosangana nezvose zvandinoda uye nezvimwe zvakawanda.
Pindura kuna Reddish
Ini handifarire masutu ehofisi zvachose, kazhinji iwo mhinduro isinganetsi yekugadzira akawanda emhando dzakasiyana dzemagwaro uye ari nekuti ivo vanoteedzera iyo fucking WYSIWYG paradigm uye kunyanya kuitisa kwakaomarara kwakaitwa naMicrosuave uye kuti ndekwehupenyu hwese.
LibreOffice pamwe neOpenOffice, iyo yazvino vhezheni yegore rapfuura uye ini handizive kana Gustavo atoiona seyakafa, zvakashata mune dzimwe nzvimbo dzekuburitswa kwemagwaro kunyangwe vachivandudza nguva dzose. Ini ndinofunga kuti kunyunyuta kukuru munyika yakakundwa neMicrosoft Office ndiko kusanzwisisika kunoonekwa kusapindirana kwema suites maviri neaya anotonga pamusika uye izvi zvinounza matambudziko mazhinji kunyangwe isiri mhosva yevagadziri veaya masutu, izvo zviri pachena kwandiri.
Semaonero angu, kugona kwayo kukuru kuve kwekusimbisa iyo ODT sekuzvipira kune yakajairwa, yakavhurika uye yakajeka maitiro. Dambudziko nderekuti harisati rawana huwandu hwakakosha kutevedzera uye kuenzanisa kuenderana kwemasimba neakanyanya uye mamwe akadai seWPS Hofisi iyo inobheja pakuve inowirirana sezvinobvira neMicrosuave suite.
Ini ndinongoshandisa Calc kupinza ma csv mafaera ayo dzimwe nguva dzimwe sarudzo dzisinga verenge uyezve kana odt faira ikawira mumaoko angu, kunze kweizvozvo ini ndinosarudza kushandisa mamwe maturusi ekugadzira zvinyorwa uye mharidzo.
Pasina kupokana, ini ndinofarira LibreOffice.
Hapana kana imwe kana imwe, zvirinani kushandisa Microsoft Excel inova kakapetwa kane chiuru pane Libre Office Calc kana Open Office.
Iyo nyowani vhezheni ye openSUSE Leap 15.1 inosvika uye idzi ndidzo nhau dzayo
Kali Linux ikozvino ine rutsigiro rweanopfuura makumi mashanu eAroid zvishandiso